Tobanka taangi dagaal ee ugu khatarsan adduunka (sawirro) – Page 10 – Radio Daljir
(9) Oplot-M (Ukraine – Yukreeyn)
Markii uu burburay Isbahaysigii Soofiyeetka, dalka Yukreeyn waxa ay la hartay sancada nooca taangiga T-80UD. Oplot waa T-80 oo la casriyeeyey.
Dhibka taangigaan ayaa ah haddii xabbaddu ay qalfoofka dhaafto ma leh wax kale oo celiya, waxa ayna u tagaysaa hubka saaran oo sii qarxinaya taangiga.
Taangigaan marna sancadiisa lama dhammaystirin lacag la’aan darteed, laakiin dalka kaliya oo gatay ee loo sanceeyey waa Tayland. Waa taangiga kaliya ee dalkii soo saaray uusan ku hubaysneyn.
Maqaalo Kale 245 Wararka 17240